Fampiroboroboana sy fampahafantarana ny vatosoa sy vato sarobidy: mila apetraka ny Label Madagascar – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
Fampiroboroboana sy fampahafantarana ny vatosoa sy vato sarobidy: mila apetraka ny Label Madagascar
Ny fametrahana ny Label Madagascar amin’ny vatosoa sy vatosarobidy, ho famantarana sy fampahafantarana ny fiavian’izy ireo avy aty Madagasikara no isan’ny lalana hampiroborobo ity seha-pihariana ity ka hanampy tosika lehibe ho an’ny toekarem-pirenena. Nanamafy izany ny Dr Patrick Voillot, manam-pahaizana manokana expert gemmologue fanta-daza maneran-tany, tsy zoviana amin’ny tontolon’ny vatosoa sy vato sarobidy. Firenena maro no efa noteteziny nandritra ny 20 taona mahery ary nampahafantarany an’izao tontolo izao ireo karazam-bato mampiavaka azy ireo avy amin’ny alalan’ny horonantsary sy boky. Amin’ny fomba maro no hanatanterahany izany fampahafantarana izany raha tsy hilaza afa-tsy ny tambazotran-tserasera YouTube misy azy, izay arahin’ny olona 98.200, ary ny fijerena ireo horonantsary navoakany dia efa mananika ny 23.000.000.
« Mivezivezy manerana izao tontolo izao ireo vaton’i Madagasikara saingy tsy ampitondraina ny tena fiavian’izy ireo marina, fotoana izao hanovàna ny tantara dia ny mba hananan’ireo vato ireo ny lazany sy ny toerana mendrika azy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena », hoy ny nambaran’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA.
Ho fanamafisana ny ezaka amin’ny fampiroboroboana ny seha-pihariana vatosoa sy vato sarobidy eto Madagasikara no nanasàna ny manam-pahaizana manokana Dr Patrick Voillot, niaraka tamin’i Maxime Voillot izay Expert gemmologue ihany koa. Nisy araka izany ny fanodinana horonantsary notanterahan’izy ireo ho fampahafantarana ny Emeraude tany Mananjary, ny Béryl tany Andilana Avaratra sy ny Saphir tany Ilakaka.
Ny Zoma 23 jolay 2021 dia nisy ny Conférence nitondra ny lohahevitra hoe « Voyage au cœur des pierres précieuses de Madagascar » nataon’ireto teratany vahiny ireto tao amin’ny Mining Business Center Ivato. Nahitana ny fandraisan’anjara avy amin’ireo mpampianatra sy mpianatra haibolantany na Sciences de la Terre avy amin’ny Oniversite sy sekoly ambaratonga ambony, nahitana ihany koa ireo manaraka ny fiofanana Gemmologie. Nanotrona izany ihany koa ireo solontena avy amin’ny Fiadidiana ny Primatiora, ny Fiarahamonimpirenena, ny Sendikalista.
← 29 Jona 2021 : Atrikasa nanehoana ny vokatry ny fanadihadiana fanisana ireo mpisehatra amin’ny fitrandrahana eladrano amin’ny Faritra Anosy sy Androy.
FAMINDRAM-PITANTANANA TEO AMIN’NY MINISITRA TEO ALOHA RAVOKATRA FIDINIAVO SY NY PRAIMINISITRA NTSAY CHRISTIAN IZAY MISOLO TOERANA VONJIMAIKA MINISITRY NY HARENA AN-KIBON’NY TANY SY NY LOHARANONKARENA STRATEJIKA →